कोरोनाको पूर्ण खोप लगाउनेमा यस्तो क्षमता बढ्ने विज्ञको दाबी ! - Nepalese Times
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित) 56 मिनेट अघि
कोरोनाको पूर्ण खोप लगाउनेमा यस्तो क्षमता बढ्ने विज्ञको दाबी !
नेप्लिज संवाददाता २३ आश्विन २०७८, शनिबार ०७:१६ (1 हप्ता अघि) १५९ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं ।नेपालमा खोपको प्रभावकारितासम्बन्धी गरिएको एक अध्ययनले खोप लगाएकाहरूमा कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमताको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
अध्ययनमा १७ सय ९६ जनालाई सहभागीको नमुना संकलन गरिएको थियो। अध्ययनले खोप नलगाएका ४३।९ प्रतिशतमा एन्टिबडी बनेको र खोप लगाएका ६५ प्रतिशतमा एन्टिबडी बनेको औंल्याएको छ।
खोप लिएको दोस्रो महिनासम्ममा एन्टिबडीको तह ८२।३३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने चौथो महिनामा एन्टिबडीको मात्रा घट्दै गएर ४३ प्रतिशतमा पुगेको छ।
त्यसैगरी अध्ययनले एक वा बढी दीर्घरोग भएकाहरूमा पनि एन्टिबडीको मात्रा फरक रहेको औंल्याएको छ। एक मात्र दीर्घरोग भएकाहरूमा ७८ प्रतिशत, दुईवटा दीर्घरोग भएकाहरूमा ७१।६९ प्रतिशत र तीनभन्दा बढी दीर्घरोग भएकाहरूमा ४२ प्रतिशत पाइएको थियो।
खोप नलिएका र कोरोना पहिचान नभएका ४६ प्रतिशतमा एन्टिबडी बनेको पाइएकाले नेपालमा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
नेपालमा प्रयोग भएका दुई मुख्य खोपहरू भेरोसेल र कोभिसिल्डमा एन्टिबडीको मात्रा ६३.७ प्रतिशत थियो भने भेरोसेल लिएकाहरूमा ७२.४ प्रतिशत थियो।
भेरोसेल खोप लिनेबित्तिकै र कोभिसिल्ड खोप लिएको दुई महिना बितिसकेपछि एन्टिबडीको मात्रा हेरिएकाले कोभिसिल्ड लिनेहरूमा मात्रा घट्दै गएको पाइएको हो। दुवै खोप एउटै अवधिमा दिएको खण्डमा एन्टिबडी दुवैमा करिब उस्तै तहको प्रभावकारिता देखिने अध्ययनको सुझाव छ।
लिनेबित्तिकै नमुना संकलन भएका कारण भेरोसेलमा एन्टिबडीको मात्रा अध्ययनमा अधिकांश सहभागी ६० वर्षमाथिका पहिलो कोभिसिल्ड लगाएका ८५ प्रतिशत थिए भने भेरोसेल खोप लिएका १४।५९ प्रतिशत थिए।
कपिलवस्तुको कृष्णनगरपालिकाका तीन, चार, सात, आठ, नौ र १२ वडामा झाडापखाला फैलिएको थियो। अध्ययनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रको खानेपानीको स्रोत पाइप फुटेर पानी दूषित बनेपछि झाडापखाला फैलिएको पाइएको छ। नागरिक दैनिकबाट